London:20-ka kooxood Ee Ugu Hudansan Aduunka . | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Mogdisho:Shirweynaha 6aad ee xiriirka shataranjiga oo lagu doortey gudoon
Chelsea 4-3 Bolton Ciyaar adag ayeey ahayd →
London:20-ka kooxood Ee Ugu Hudansan Aduunka .
Waxaa kaalinka labaad galay kooxda Real Madrid oo iyadu Hogaanka Dhaqaalaha dunnka Dhanka Naadiyada Haysatay Waxaana markii labaad ee Xirir ah Qaatay Man utd
No.1: Manchester United, waxey ciyaartaa horyaalka English Premiership
waxaa leh kooxdaasi oo shareholder ka ah Glazer family
hatideeda waxaa lagu qiyaasay : $1.87 billion, kooxdaani waxey macaash badan ka heshay TV deal. waxeyna milkiilayaashu ay dhimeen deyntii lagu lahaa kooxda oo gaareysay $1 billion of debt.
No. 2: Real Madrid, waxey ka ciyaartaa horyaalka: Spanish Primera Liga
xubaha kooxdaasi ayaa waxey yihiin Owner/majority shareholder:
hantideeda waxaa lagu sheegay : $1.353 billion
kooxdaani waxey lumisay shirkadii ay xayeysiinta u sameyn jirta ee dharkeeda soo saari jirtay oo ah BenQ Mobile, waana sanadki labaad oo ay list kaalinta labaad ka gasho.
No. 3: Arsenal, waxey ka ciyaartaa horyaalka: English Premiership
Owner/majority shareholder: waa ninka la yiraah Alisher Usmanov
hantideeda waxey dhantahay: $1.2 billion
London club waxey iibsatay garoonka cusub ee Emirates Stadium oo ay sanadkii 2-aad ku ciytaareyso, kooxdaan ayaa kor u qaaday qiimaha ticket garoonkeeda lagu soo galo taasoo qeyb ka ah hantida ay heshay.
No. 4: Bayern Munich, waxey ka ciyaartaa horyaalka: German Bundesliga
Owner/majority shareholder: waxaa ka ah xubanaha kooxda (club members)
hantideeda waxaa lagu qadaraa : $1.11 billion
Bayern Munich waxey nadiifisay deyntii lagu lahaa, sanadkii tagana waxey iibisay 50% sheerka qeyb ka mid ah garoonkeeda , taasoo kor u qaaday dhaqaalaheeda xillli ciyaareedkaan.
No. 5: Liverpool, waxey ka ciyaarta : English Premiership
Owner/majority shareholder: waxaa ah George Gillett/Thomas Hicks
dhaqaalaheeda waxaa lagu qadaray: $1.01 billion
si ay u gudaan deynta lagu leeyahay waxey joojiyeen dhismaha garoona cusub sanadkii tagay. Hicks and Gillett waxey 3 bilood gudahood ku bixiyeen $600 million oo deyn ah oo ay ku lahaayeen RBS/Wachovia
No. 6: AC Milan, waxey ka dheeshaa ,: Italian Serie A
Owner/majority shareholder: waxaa isku ah ninka la yiraah Silvio Berlusconi
hantideeda waxaa lagu qadaray : $990 million
kooxdaani waxey garoonka la wadaagtaa Inter Milan, waxeyna sanadkaan seegtay iney ka qeybgasho ’09 Champions league . daqligeeda ayaa sara u kacay markii ay dhaqaalo fiican ka heshay new TV deal gaar ahaan shiradaha xaga warbaahinta ee la yiraah Berlusconi’s Mediaset.
No. 7: Barcelona, waxey ka ciyaartaa : Spanish Primera Liga
Owner/majority shareholder: waxaa ka ah kooxda xubnaha kooxda ku jira (club members)
hantideeda waxey gaareysaa : $960 million
The Champions league semifinalist waxey maalgalin ku sameyneysaa Major League Soccer team in Miami sidoo kale waxey $400 million ku bixisay si ay u hormariso garoonkeedeeda faca weyn.
No. 8: Chelsea, waxey ka ciyaartaa : English Premiership
Owner/majority shareholder: waa ah Roman Abramovich
dhaqaalaheeda : $800 million
walow kooxdaan ay booska labaad kaga jirto Premiership iyo Champions leagues, hadana waxaa hoos u dhac ku yimid dadkii soo gali jiray garoonkeeda Stamford Bridge, in ka badan $700 million oo deyn ahana waa lagu leeyahay.
No. 9: Juventus, waxey ka ciyaartaa : Italian Serie A
Owner/majority shareholder: waxaa ka aha Agnelli family
dhaqaalaheeda wuxuu gaarayaa : $600 million
Juventus waxey dhisatay garoon cusub oo heer dhexe waxeyna sheegtay in xaquuqdiisa ay iibisay.
Iyadoo waxii intaas dheer aad kaga bogan kadhaan boga lagu maacaabo Waaga cusub.com
Comments Off on London:20-ka kooxood Ee Ugu Hudansan Aduunka .
Posted by Mohamed Tollman on April 12, 2009 in Uncategorized